6 Otú ọ dị, n’afọ Eze Ọzaya nwụrụ,+ ahụrụ m Jehova+ ka ọ nọ n’ocheeze+ dị elu, nke e bulikwara elu, uwe mwụda ya sachikwara ebe niile n’ụlọ nsọ ya.+
2 Ndị seraf guzo n’elu ya.+ Nke ọ bụla nwere nku isii. Ọ na-eji abụọ ekpuchi ihu ya,+ jiri abụọ na-ekpuchi ụkwụ ya, jirikwa abụọ na-efegharị.
3 Ha na-etiku ibe ha, sị: “Nsọ, nsọ, nsọ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha dị.+ Ihe niile juru n’ụwa na-egosi ebube ya.”
4 Ụda olu nke onye ahụ na-akpọ òkù wee mee ka ebe e konyere ibo ụzọ+ nke ụlọ ahụ malite ịma jijiji, anwụrụ ọkụ wee jupụta n’ụlọ ahụ.+
5 M wee sị: “Efuola m! N’ihi na ọ fọrọ nke nta ka m nwụọ, n’ihi na abụ m onye egbugbere ọnụ ya na-adịghị ọcha,+ ọ bụkwa n’etiti ndị egbugbere ọnụ ha na-adịghị ọcha ka m bi;+ n’ihi na anya m ahụwo Eze bụ́ Jehova nke ụsụụ ndị agha!”+
6 Otu n’ime ndị seraf wee fekwute m, o jikwa icheku ọkụ+ nke o ji ihe yiri mkpà gụta n’ebe ịchụàjà.+
7 O wee metụ m ya n’ọnụ,+ sị: “Lee! Ihe a emetụla egbugbere ọnụ gị, e wepụwo njehie gị, e kpuchiwokwa mmehie gị.”+
8 M wee malite ịnụ olu Jehova ka ọ na-asị: “Ònye ka m ga-eziga, ònye ga-ejekwara anyị?”+ M wee sị: “Lee m! Ziga m.”+
9 O wee sị: “Gaa sị ha, ‘Nụrụnụ ugboro ugboro, ma unu aghọtala; hụkwanụ ugboro ugboro, ma unu amatala ihe ọ bụla.’+
10 Mee ka obi ndị a ghara ịnabata ihe,+ meekwa ka ntị ha kpọchie akpọchie,+ nyachiekwa anya ha, ka ha wee ghara iji anya ha hụ ụzọ, gharakwa iji ntị ha nụ ihe, ka obi ha gharakwa ịghọta ihe, ka ha wee ghara ichegharị, e wee gwọọ ha.”+
11 M wee sị: “Jehova, ruo ole mgbe?”+ O wee sị: “Ruo mgbe obodo niile ghọrọ mkpọmkpọ ebe, n’enweghị onye bi ha, ruo mgbe ụlọ niile na-enweghị mmadụ nọ ha, mgbe e bibiwokwara ala a mee ka ọ tọgbọrọ n’efu;+
12 mgbe Jehova kpọgakwara ndị mmadụ n’ebe dị anya, ebe a gbahapụrụ agbahapụ n’etiti ala a+ ga-adịkwa nnọọ ukwuu.
13 Otu ụzọ n’ụzọ iri ka ga-anọ n’ime ya,+ ọ ga-aghọkwa ihe a ga-agba ọkụ ọzọ, dị ka osisi ukwu, dịkwa ka oké osisi, bụ́ ndị úkwù ha na-afọdụ+ ma e gbutuo ha;+ mkpụrụ dị nsọ ka úkwù ya ga-abụ.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D23%26Chapter%3D6%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl